Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » ကူညီကြပါဦး [Problem]
1 ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 7:09 pm
ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာက memory stick ကို ဖွင့်လိုက်ရင် computer က format ရိုက်ခိုင်းနေတယ်
အဲ့ဒါ ဘာ virus မျိုးလဲ့
ဘယ် antivirus နဲ့သတ်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်
အစကတော့ memory stick လောက်ပဲ့စောစောက error မျိုးပြတယ်
နောက်တော့ computer ကို format ချလိုက်တယ်
2 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 7:30 pm
အစ်ကိုက ဘာ Windows ကို သုံးနေတာလဲမသိဘူး
3 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 7:33 pm
အရင်က vista utimate မှာဖြစ်ဘူးပါတယ်
4 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 7:42 pm
5 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 7:46 pm
memory stick ထဲက data တွေကုန်မှာစိုးလို့
ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာက ဒီပြသာနာကို memory stick ကမဖြစ်ပဲ
6 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 7:53 pm
အဲဒီ့ တက်လာတဲ့ Message Box ကို Print Screen ဖမ်းပြီးတော့ ပြနိုင်ရင်တော့ ပိုအကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ...
ကျနော် ထင်နေတာ တစ်ခုရှိလို့ပါ....
7 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 9:45 pm
အဲဒါ က ကျနော့် အမြင်ပြောရရင် .. format ပဲရတော့မယ် .. ပြီး မှ recovery နဲ့ ပြန်ဆွဲပေါ့ .. ထင်တာပြောတာနော် .. အေးဆေးလုပ်ပေါ့ဗျာ .. :OK:
8 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 6th August 2009, 11:56 pm
ကျွန်တော် ဖြစ်ဘူးတာ တစ်ခု ရှိတယ်နော် .. အဲလို လေးဖြစ်ရင်တော့ တွားပီ .. ဟီး .. ကျွန်တော့် တုန်းကလည်း အဲလိုပဲ ဘယ် window မှာပဲ စမ်းစမ်း မရဘူး format ချည်းပဲ ပတ်ချခိုင်းနေတာနောက်ပိုင်းကျတော့ လုံးလုံးကို သုံးမရတော့လို့ ညောင်းတွားတယ် ဗျာ .. အားတက်စရာလေး လာပြောသွားတယ်နော် ... အဟဲ .. ကျွန်တော် လိုမျိုးဖြစ်မှ ပါ ...ထပ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်စေချင်တယ်ဗျာ ..အဲလိုလေးတွေဖြစ်ရင် ဘယ်လို မျိုးဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတာ အဖြေလေးဘာလေးသိရအောင် ပေါ့ ... အဂျား အဂျား ဖိုက်တင်း ( ကြိုးစားထား ! ) .. အဟဲ ..
9 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 7th August 2009, 8:54 am
formate ရိုက်ပြီး data တွေကို recuva software သုံးပြီးရှာလိုက်တာ
အရင်က data တွေတောင်ပြန်ရတော့ပိုအဆင်သွားတယ် ဟီး
10 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 7th August 2009, 11:55 am
minkoko wrote:်
format ရိုက်ပြီး data တွေကို recuva software သုံးပြီးရှာလိုက်တာ
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် recuva software ကို တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ.. နောက်လူတွေ အခက်အခဲဖြစ်ရင် ကူညီနိုင်အောင်ပါ ..
11 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 7th August 2009, 12:31 pm
12 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 8th June 2010, 1:56 pm
ကျွန်တော့် စက်မှာတော့ ဗိုင်းရပ်စ်လို့ ထင်တာပါပဲဗျာ။ သိသိသာသာတော့ လောလောဆယ် ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးဘူး . ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲသွားတာက .. ဖိုင်တွေ ဖိုဒါ တွေရဲ့ နာမည်ဟာ အရင်က အနက်ရောင်နဲ့ပဲ ရှိနေရာကနေ အခု တချို့ဖိုင်တွေက အပြာရောင်တွေ ပြောင်းသွားတယ် ... ဒီလိုလေးပါ
အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲဗျာ .. ကူညီကြပါဦး ... တဖြည်းဖြည်း အဲဒီလို အပြာရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ ဖိုင်တွေ များလာပါတယ်။
13 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 8th June 2010, 4:29 pm
antivirus software တွေတင်ထားသေးလာ မသိဘူး တကယ်လို့ မရှိရင်တော့ အရင်တင်ပြီးစစ်ကြည့်ပါအုံး တကယ်လို့ မရဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးစဉ်းစားတာပေါ့ ကိုအထွန်း
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စက်လည် ဖြစ်တယ် အခုထိတော့ ဘာမှ မထူးခြားသေးဘူးဗျ
14 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem] on 4th July 2010, 6:16 pm
15 Re: ကူညီကြပါဦး [Problem]